युट्युबमा को के हो ?- विविधा - कान्तिपुर समाचार
युट्युबका लागि खटिने एउटा समूहले आफूलाई पत्रकार बताउँदा पत्रकार जमात खितखित हाँसिरहेको छ भने तिनले आफूलाई युट्युबर बताउँदा युट्युबरहरु नै लाजमर्दो मानेर आफूलाई अर्थोकै नामले चिनाउन थालेका छन् ।
आश्विन १०, २०७७ सजना बराल
यो लेख ध्रुव राठीको बारेमा होइन तर उनीबाटै सुरु गर्छु र अन्त्य पनि उनमै हुनेछ । युट्युब हेर्नेलाई ध्रुव को हुन् पक्कै थाहा होला । तर, यो मिडियामा जुन प्रकारका सामग्री बढी हेर्ने बानी हामीलाई पर्दै गएको छ, त्यसले हामीमध्ये धेरैले उनलाई नचिन्न सक्ने सम्भावना प्रचुर छ र यो अस्वाभाविक होइन ।
युट्युबमा सराहनीय काम गर्दै आएका ध्रुवसँग भारतकै वरिष्ठ पत्रकार एवम् म्यागसेसे पुरस्कार विजेता रवीश कुमारले एनडीटीभीको अन्तर्वार्तामा सोधेका छन्, ‘तपाईं आफूलाई पत्रकार, मिडिया–पर्सन वा केका रूपमा देख्नुहुन्छ ?’ (के भनेर चिनाउनुहुन्छ ?)
ध्रुवको जवाफ, ‘म आफूलाई युट्युबरका रूपमा पहिले देख्छु । एक आर्टिस्ट मान्छु आफूलाई । किनभने मलाई भिडियो बनाउन मन पर्छ । यो फरक कुरा हो कि मेरा भिडियो त्यो क्षेत्रका बारेमा हुन्छन् जुन पत्रकारिता वा एक्टिभिजमसँग सम्बन्धित छन् । तर, यत्तिको भरमा म आफूलाई पत्रकार भन्न सक्दिनँ, मेरो योग्यता नै छैन ।’
योग्यताको कुरामा रवीश ध्रुवसँग सहमत हुँदैनन् । ‘योग्यता के हो र ? तपाईं तथ्यको पछि जति दगुर्दै जानुहुन्छ त्यही नै (पत्रकारको) योग्यता हो...,’ रवीशको भनाइ ।
यी दुईको संवादमा मलाई दुइटा चीज खुब मन परे । एक, ध्रुवले आफूलाई सगर्व युट्युबर भनेको कुरा । दोस्रो, तथ्यको पछि दौडिने कुरा । यी भनाइले उनीहरू आफ्नो पेसाप्रति कति इमानदार छन् र आफ्नो माध्यम (युट्युब, टेलिभिजन, रेडियो आदि) लाई कति आदर गर्छन् भन्ने झल्काउँछ ।
तिनै दुई वचनलाई आधार मानेर यो पनि भन्न सकिएला, जो आफ्नो पेसा र माध्यमप्रति इमानदार हुँदैन वा त्यसको श्रद्धा गर्दैन उसले आफू जे होइन त्यही हुँ भन्दै हिँड्छ । आफू जे हो त्यो स्विकार्दैन र आफूले जे गर्नुपर्ने हो त्योभन्दा फरक काम गर्छ । जस्तै, हामीले देख्दै आएका छौं नि– कतिपय युट्युबरहरू आफूलाई पत्रकार बताइहिँड्छन् तर तथ्य होइन क्रन्दन, सनसनी र भ्युजको पछि आँखा चिम्लेर दौडिन्छन् ।
मलाई अचम्म लाग्ने कुराचाहिँ उनीहरू युट्युबकै लागि भनेर दिनरात खटिन्छन् तर त्यही युट्युब, आफ्नो सानदार माध्यमप्रति गर्व गरेर ‘म युट्युबर हुँ’ भन्न हिचकिचाउँछन् । हामी छेउछाउका अधिकांश युट्युबर आफूलाई कन्टेन्ट क्रिएटर, भ्लगर, आर्टिस्ट, पत्रकार, गेमर, कमेडियन, मिडिया पर्सनलगायत के–के नामले चिनाइरहेका हुन्छन् । युट्युबभित्र छिरेर जेसुकै गरे पनि सर्वप्रथम उनीहरू युट्युबर हुनुपर्ने हो र त्यसपछि बाँकी । तर, तिनलाई युट्युबरको सट्टा बाँकी नाउँले चिनिन बढी मजा लाग्दो रहेछ, ठीकै छ त्यो पनि ।
पुडिपाई, जेफ्री स्टार, लीली सिंहदेखि, आशिष चञ्चलानी, सन्दीप महेश्वरी, ब्रेन्ट रिभेरा र हाम्रै जेम्स श्रेष्ठहरूले युट्युबमा जे–जे काम गरे पनि इन्टरनेटमा खोजी गर्दा यिनलाई युट्युबरका रूपमा भेटिन्छ । यिनीहरू हुन् नै त्यही । युट्युबर हुनु तिनका लागि इज्जतिलो कुरा पनि होला । ‘युट्युबर’ शब्द शब्दकोशमा समावेश भइसकेको छ । क्याम्ब्रिज शब्दकोशका अनुसार, युट्युबका लागि भिडियो बनाउने र भिडियोमा देखिने व्यक्ति युट्युबर हो ।
युट्युबमा अहिले जम्मा ३१ मिलियनवटा च्यानल रहेछन् । सबै च्यानल–धनी युट्युबर होइनन् भन्ने त बताउनै नपर्ला । त्यसमा पनि अन्तर्वार्ता लिने, रिपोर्ट वा सूचना सामग्री बनाउने, लाइभ प्रसारण गर्नेहरू सबै पत्रकार होइनन् । रेडियो, टीभीमै पनि यी काम गर्नासाथ मान्छे पत्रकार भइहाल्दैन । रवीशकै भनाइ फेरि दोहोर्‍याउँदा पत्रकार हुन ऊ कम्तीमा तथ्यको पछि दौडेको छ/छैन भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । योसँगै बाँकी ‘योग्यता’ पनि चाहिएलान् । नत्र भए ऊ पित पत्रकार बन्ला ।
आफ्नो मिडियाप्रति अनुगृहीत भएर वा उनकै अनुसार पत्रकार कहलिन योग्य नलागेर ध्रुवले आफूलाई युट्युबर बताएका होलान् । तर, उनी जुन प्रकारले तथ्यको खोजी गर्छन्, विज्ञका राय बुझेर र स्वअध्ययनपश्चात् विविध राजनीतिक, सामाजिक आदि विषयवस्तुबारे शालीन ढंगले जानकारी दिँदै आफ्ना धारणा राख्छन् वा टिप्पणी गर्छन्, उनलाई पत्रकार भन्न कसैले आनाकानी गर्दैन । मूलधार भनिने रेडियो, टीभी, पत्रपत्रिकामा आबद्ध नभएरै र घर–झगडा, दुःख–पीडा, कलह, अभद्रता र क्रन्दनहरू ‘एक्सपोज’ नगरीकनै उनी इज्जतिला पत्रकार भएका छन् ।
तर, कस्तो विडम्बना ∕ रातारात फिल्डमै पुगेर ब्रेकिङ न्युज दिने, पीडित, पीडक र रमितेहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकुरानी गर्ने र मर्का परेकालाई सहयोग समेत जुटाइदिन सक्नेहरूले भने आफूलाई ‘पत्रकार हुँ’ भनेर दाबी गरिरहँदा एकथरी समाज ‘ए हो ?’ को शैलीमा खिसी गरिरहेको छ । उता ध्रुवहरूले चाहिँ ‘म पत्रकारै होइन’ भन्दासमेत रवीशहरू ‘किन नहुनु’ को भावमा प्रस्तुत भइदिन्छन् । यस्तो लाग्छ, नयाँ माध्यमले मान्छेको पहिचानलाई गोलमटोल पारेर सबैलाई के हो, के होइनमा अल्झाइदिएको छ ।
जतिसुकै गोलमाल भए पनि पत्रकार पहिल्याउन खासै गाह्रो भने छैन । त्यो मानिस जो समाचार वा अन्य सान्दर्भिक सूचना संकलन गर्छ, तीबारे लेख्छ, तस्बिर खिच्छ, समाचार सम्पादन वा त्यसमा टिप्पणी गर्छ, उही पत्रकार हो । यो शास्त्रीय परिभाषालाई छोडेर अहिलेको परिप्रेक्ष्यअनुसार भन्दाचाहिँ फाल्तुको होहल्ला नगरी, अचाक्ली विरही नबनीकन, शान्त र संयम पाराले सूचना, समाचार वा टिप्पणीहरू प्रस्तुत गर्ने, झूटा/भ्रामक तथ्यविरुद्ध फ्याक्ट चेक गर्ने, मान्छे र परिस्थितिको संवेदनशीलताअनुरूप प्रश्न राख्ने र मोटामोटी रूपमा यिनै काम गरेमार्फत गुजारा टार्ने मानिस पत्रकार हो ।
मैले बुझेअनुसार कसले कुन माध्यमबाट पत्रकारिता गरेको छ भन्ने कुराले ऊ असली पत्रकार हो कि होइन भन्ने कुराको निर्धारण पटक्कै गर्दैन । चाहे रेडियो, टीभी, पत्रिका होस् वा युट्युब, ट्वीटर, फेसबुक वा टिकटक, जुन कुनै माध्यमबाट पत्रकारिता गर्न सकिन्छ र जुन कुनै माध्यम प्रयोग गरेर पत्रकार बन्न सकिन्छ । अझै भन्नुपर्दा, पत्रकारिता यस्तो क्षेत्र हो जहाँ नयाँ र आधुनिक माध्यमको निकै सराहना र बरोबर प्रयोग हुन्छ चाहे त्यो माध्यम अरू नै कुनै क्षेत्र वा प्रयोजनका लागि निर्माण भएको किन होस् !
तसर्थ, युट्युबबाट सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने काम हुन्छ भने सो काम गर्ने व्यक्तिलाई पत्रकार मान्न कुनै अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, मानिँदैन । उसले खुबै भलाद्मी भएर आफूलाई युट्युबर हुँ भने पनि दुनियाँले नै उसलाई ‘तँ पत्रकारै होस्’ भनिदिन्छ । तर, हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भनेचाहिँ यहाँ रमाइलो चलिरहेको देख्छु म । युट्युबका लागि खटिने एउटा समूहले आफूलाई पत्रकार बताउँदा पत्रकार जमात खितखित हाँसिरहेका छन् भने तिनले आफूलाई युट्युबर बताउँदा युट्युबरहरू नै लाजमर्दो मानेर आफूलाई अर्थोकै नामले चिनाउन थालेका छन् ।
आँडेपाँडे भिडियो बनाएर वा त्यसमार्फत झूट, भ्रम, अश्लीलता, अन्धविश्वास, गालीगलौज, अवैज्ञानिक र अर्थसत्य कुरा फैलाउनेहरू युट्युबका पीत पत्रकार वा हाउडेहरू हुन् । मूलधारका मिडियाले बेवास्ता गरेका कतिपय मुद्दा तिनले उठाउन खोजेजस्तो गरे पनि र मूलधारवाला मिडियाले इच्छा नगरेको ठाउँमा उनीहरू फुर्तिलो भएर पुगे पनि तिनले विषयवस्तुमाथि गर्ने ज्यादती र विषयवस्तुप्रतिको तिनको असंवेदनशीलता पत्रकारिताको दृष्टिमा अक्षम्य खालको हुँदै आएको छ । र, सबैभन्दा डरमर्दो कुरा, जुन हिसाबमा यस्ता भ्रामक कन्टेन्ट खतप हुने गरेका छन्, यसले युट्युबमा पित पत्रकारिता र भ्रमकारिता मूलधार बन्ने खतरा बढेको देखाउँछ ।
यो नौजवान मिडियामा जथाभावी गर्नेको संख्या सायद बढी भएर वा जथाभावी भिडियोहरू चाँडो अनि धेरै मात्रामा बिक्ने भएकाले होला केही जेन्युइन युट्युबरहरू आफूलाई युट्युबर बताउन हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था आइपुगेको छ । हामीकहाँ युट्युब जति धेरै लोकप्रिय हुँदै छ, उति बदनाम पनि । मैले युट्युबमा च्यानल खोलेर भिडियोसम्बन्धी काम गर्न लागेकोबारे साथीभाइलाई बताउँदा सबैले एउटै प्रतिक्रिया दिए, ‘ए, तिमी पनि अब युट्युबे बन्ने ?’
ओहो ∕ युट्युबरहरू कति छिट्टै ‘युट्युबे’ बनिसके नेपालमा ∕ तिनले राम्रो काम गरिदिएका भए ‘युट्युबु’ बन्थे, सायद । हाम्रो माया गर्ने र खिस्याउने तरिकै मिठो ∕ तर, अझै पनि माया पाउन ढिलो भएको छैन । तसर्थ, जेन्युइन युट्युबरहरू जुझारु हुन आवश्यक छ अब । यतिबिघ्न जुझारु कि ध्रुवले झैं तिनले आफूलाई युट्युबर हुँ भनिरहँदा रवीशहरू लोभिएर ‘होइन तिमी पत्रकारै हौ’ भन्न सकून् । यस्तो जुझारु कि युट्युबरलाई आफ्नो मान्न सम्बन्धित क्षेत्र लालायित होस् ।
प्रकाशित : आश्विन १०, २०७७ १०:१७
कोरोनापछि महिलालक्षित रूढिवादी सन्देश दिने टिकटक बग्रेल्ती बनिरहेका छन् । महिलाको रूप, व्यवहार, भूमिका, जिम्मेवारी, लवाइ–खवाइ र सम्बन्धहरूलाई लिएर निकै हल्का स्तरका, उरन्ठेउला र सस्ता सन्देश तिनले अभिव्यक्त गर्ने गरेका छन् ।
आश्विन १०, २०७७ अनिशा भट्टराई
टिकटक ! यो एप चलाउनेको त कुरै छोडौं, नचलाउनेलाई समेत यसबारे अनभिज्ञ रहिरहन अब गाह्रो छ । मेरो घरका मान्छेको लगाव देखेर मैले पनि टिकटिक डाउनलोड गरेकी थिएँ । लकडाउनका बेला यो मन भुलाउने र समय काट्ने मेलो बन्यो ।
कोरोनापछि नेपालमा टिकटकको प्रयोग ह्वात्तै बढेको छ । कतिसम्म भने नेपाल भित्रिने अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको २५ प्रतिशत टिकटकमा मात्रै खपत हुन्छ । लकडाउनअघि ७ जीबी खपत हुनेमा लकडाउनपछि १३ जीबीपीएस अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ टिकटकमा खपत भइरहेकोबारे केहीअघि ‘कान्तिपुर’ मै समाचार आएको थियो । मान्छेहरूले फेसबुकभन्दा टिकटकमा बढी समय बिताउन थालेका छन् ।
टिकटक टाइमपासको साधन मात्रै नभएर आफ्नो कला देखाउने राम्रो र लोकप्रिय प्लेटफर्म पनि हो । तर, लोकप्रियतासँगै कला र मनोरञ्जनको नाममा रूढिवादी चालचलन र विचारलाई यसले प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । र, तिनको पुनरुत्पादन बढाएको छ । जस्तै– कोरोनापछि महिलालक्षित रूढिवादी सन्देश दिने भिडियो बग्रेल्ती बनिरहेका छन् । महिलाको रूप, व्यवहार, भूमिका, जिम्मेवारी, लवाइ–खवाइ र सम्बन्धहरूलाई लिएर निकै हल्का स्तरका, उरन्ठेउला र सस्ता सन्देश तिनले अभिव्यक्त गर्ने गरेका छन् ।
महिला मनमोहक वस्तु ?
गोरो, चम्किलो अनुहार अनि त्यसमाथि आकर्षक मेकअप– ओठ र गालामा लाली, आँखामा गाजलको एक धर्सो रेखी ! थ्रेडिङ र वाक्सिङ अत्यावश्यक ! किनभने महिलाको अनुहार र शरीरमा रौँ हुनु हुँदैन नि !
माथिको भनाइ मेरो होइन, टिकटकमा महिलाको सौन्दर्यलाई लिएर बनाइने भिडियोहरूको हो । ती भिडियोमा के मात्र भनिएको छैन, के मात्र देखाइएको छैन ! लकडाउनको समयमा पार्लर जान नपाएर महिलाहरू ‘तर्साउने’ जस्ता देखिन थाले रे, भिट (रौं हटाउने क्रिम) नपाएर केटाजस्तै भए रे, काखीबाट एक फिट लामो कपाल निस्किसक्यो रे !
महिलाले मेकअप गर्न नपाएर तिनको फोनको फेसलक नखुलेको, मेकअपबिनाको फोटो देखेर ब्वाइफ्रेन्ड र श्रीमान् तर्सिएको आदिबारे टिकटकरहरूले मनग्गे भिडियो बनाएका छन् । ती भिडियोले महिलाको पहिचान भनेकै रूप हो, महिला लालीपाउडरमै अल्झिन्छन्, शृंगार नगरे ती ‘कुरूप’ बन्छन् भन्ने सन्देश दिइरहेका छन् ।
यस्ता सन्देश हामीले उहिल्यैदेखि हेर्दै, सुन्दै र ग्रहण गर्दै आएका छौं । ‘रामायण’, ‘ॐ नमः शिवाय’, ‘श्रीकृष्ण’ जस्ता धार्मिक टेलिसिरियलमा देवी वा अस्परालाई गोरी, कम्मर छिनेकी, ठूला आँखा, लामो केश, छरितो जीउडाल भएकी, चिटिक्क परेकी युवतीका रूपमा देखाइएको हुन्थ्यो/हुन्छ । मोटा आँखीभौं, कालो वर्ण, ज्यांगो शरीर भएकालाई राक्षसनीका रूपमा देखाइन्छ । यसले गर्दा हाम्रो दिमागमै राम्री हुनु भनेको गोरी, पातली, बेदाग वा शृंगार गरेर सिनित्त परेकी हुनु अनि नराम्री भनेको चाहिँ जताततै रौं भएकी, डन्डीफोर नलुकाएकी, दाँत फाटेकी, भुँडी लागेकी आदि हुनु हो भन्ने खालको छाप परेको छ ।
त्यो छापलाई फिल्म, सिरियल, विज्ञापनहरूले असाध्यै गाढा पारिदिएका छन्, जसले गर्दा सौन्दर्य प्रसाधनको बजार विशाल बन्न पुगेको छ । राम्री हुन के गर्नुपर्छ भन्नेबारे जताततै सल्लाह–सुझाव पाइन्छन्– टिकटकमा पनि । राम्री हुन शृंगार नगरे महिला ‘पुरुषजस्ता’ देखिन्छन्, ‘कुरूप’ बन्छन् वा ‘तर्साउने’ खालका हुन्छन् भनेर पन्ध्र सेकेन्डदेखि एक–मिनेटभित्रमै एक जुनीलाई पुग्ने सन्देश टिकटकबाट प्रसारित हुन्छ । यसले महिलालाई मनमोहक वस्तुको रूपमा प्रस्तुत हुन प्रोत्साहन गरेको छ ।
केही समयअघि एउटा कन्टेन्ट पपुलर भएको थियो, जहाँ एक जना पुरुषलाई दुइटा विकल्प दिइन्छ्र, जसमध्ये एउटाचाहिँ सधैंभरि श्रीमतीसँग बस्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो विकल्प सुन्नासाथ ती व्यक्तिले हत्त न पत्त दोस्रो विकल्प सुन्दा पनि नसुनी दोस्रो नै रोज्छन् । यसबाट के बुझ्ने ?
श्रीमती माइत जाँदा खुसीले नाच्ने, श्रीमतीसँग बस्नुभन्दा मर्नु बेस ठान्ने, श्रीमतीको मोबाइल नम्बर ‘कोरोना भाइरस’ भनेर सेभ गर्नेदेखि बिहेपछि बूढीले खाना बनाउन नजानेर दुःख पाएको, भाँडा धस्काउनुपरेको, स्वतन्त्रता खोसिएको र श्रीमतीले लकडाउनभर घरायसी काममा दलाएको, उनको डरले काम गर्नुपरेको भन्नेबारेका भिडियोहरू कति हो कति भेटिन्छन् टिकटकमा ।
केहीले त आफ्ना भिडियोमा ‘बूढीपीडित’ भनेर टेक्स्टसमेत राख्ने गरेका छन् । दुःखको कुरा यस्ता भिडियो पपुलर भइदिन्छन् । र, तिनमा डुएट बनाउने वा तिनको अडियो प्रयोग गरेर त्यस्ता कन्टेन्टलाई व्यापक बनाउने गरिन्छ । श्रीमतीहरू किचकिचे हुन्छन्, तिनले श्रीमान्को शोषण गर्छन्, यो लकडाउन/निषेधाज्ञामा पतिहरूको जीवन कैदीसरह भइरहेको छ भन्ने आशयका भिडियोहरू हेर्दा म निराश हुन्छु ।
खासमा गलत त्यस्ता भिडियो बनाउनेहरू होइनन् । यिनले त जे बिक्छ त्यही बनाए । गलत त यस्तो दृष्टिकोण विकास गरिदिने सोच र संस्कार हो, जसले श्रीमती र महिलालाई पुरुषको मनोरञ्जनको साधनका रूपमा चित्रित गरिदियो, जसले घरायसी काम गर्नु भनेको पुरुषका लागि लाजमर्दो विषय वा जोइटिङ्ग्रे हुनु हो भन्ने कुविचार स्थापित गराइदियो, जसले आफ्नी जीवन–संगिनीलाई कि सेवक कि शासक वा नभए डरलाग्दो भाइरससँग तुलना गर्न सिकायो । गलत त त्यो पितृसत्तात्मक सोच भरिदिनेहरू हुन्, जसका कारण हामी यसरी जान–अन्जानमै पितृसत्ताका मतियार बनेका छौं ।
एउटा प्लट यस्तो छ, जसमा ज्योतिषीले हात हेर्दै बच्चाको बाउलाई खतरा छ भनिरहँदा महिला पात्रको डाइलग हुन्छ, ‘धन्न मेरो बूढोलाई केही हुँदैन ।’ अन्य भिडियोमा श्रीमान् बाहिर गएपछि घरमा भएको सहयोगीसँग सम्बन्ध जोड्ने, छिमेकी पुरुषसँग प्रेम वा शारीरिक सम्बन्ध राख्नेजस्ता कुराहरू देखाइन्छन् ।
केटीहरू सम्पत्तिको पछि लाग्छन्, सयुंक्त परिवारमा बस्न खोज्दैनन्, वृद्ध अवस्थाका सासू–ससुरालाई हेला गर्छन् भन्ने खालका सन्देश दिने टिकटक भिडियोहरू महिला टिकटकरले समेत बनाएको देख्दा म हैरान हुन्छु । श्रीमान् र छोराछोरी नभए महिला हुनुको अर्थ छैन, बिहे गरेपछि मात्रै महिलाको जीवन सार्थक हुन्छ, बच्चा जन्माउनु नै तिनको अन्तिम भूमिका हो भन्ने सन्देश दिने भिडियोहरू टिकटकभर यत्रतत्र छन् ।
पितृसत्तात्मक सोचको पुनरुत्पादन
कमेडीका नाउँमा महिलालाई उडाउने, तिनको मानहानि गर्ने, दुईअर्थी संवाद बोल्नेजस्ता सस्ता शैली समग्र मनोरञ्जन क्षेत्रले अंगकृत गर्दै आएको छ । टिकटकले पनि त्यसको सिको गरेको छ । अझ, धेरैजसो टिकटकरले त फिल्म, टेलिफिल्म, कार्यक्रमहरूकै भिडियो क्लिप, संवाद र संगीतमा लिप सिंक गर्ने गर्छन् । तीमध्ये कतिपय कन्टेन्ट महिलाको हकमा भद्दा र अपमाजनक हुन्छन् । ‘जस्ट फर फन’ लेख्दैमा यस्ता भिडियो ‘फन’ वा मनोरञ्जनको विषय कसरी बन्न सक्छन् !
कुनै विषयलाई ठट्टा बनाउनु भनेको त्यसको गम्भीरतालाई बेवास्ता गर्दै संवेदनशीलता घटाउनु हो । श्रीमतीबाहेक अन्य सम्बन्धलाई लिएर यो स्तरको ठट्टाहरू भएको देखिँदैन । श्रीमतीलाई किन यतिबिघ्न मजाकको विषय बनाइएको ? ऊदेखि डर नभएर, उसको ‘फुर्ती’ नपचेर वा उसलाई जोकर, शासक, निरीह, सहायक, खलनायक वा कनिष्ठ ठानेर ?
यहाँ पनि दोष ती भिडियो बनाउनेहरूको होइन, उनीहरू त पितृसत्तात्मक समाजका नमुना वा प्रोडक्ट मात्रै हुन्, जसले सानैदेखि त्यस्तै भएको देखे, त्यही सिके र त्यही गरे । अनि, अहिले टिकटकको माध्यमबाट त्यसैलाई बढाउँदै लगिरहेका छन् । अब यिनै कुरा स–साना नानीबाबुले पनि सिक्छन् र अर्को पुस्ता पनि पितृसत्तावादी भएर निस्किन्छ । दोष हाम्रो सांस्कृतिक संरचनाको हो, जसले यो पितृसत्तावादी चेतलाई मलजल गर्न हरदम भूमिका खेलेको छ ।
मेकअप नगरे भूतजस्तो देखिइन्छ भन्नु, आमालाई होच्याउने खालका वाक्यांश प्रयोग गर्नु, धेरै पढेर पनि बाले आमाजस्ती श्रीमती पाए भन्नु, आमाको नम्बर बाले कोरोना भाइरस भनेर सेभ गर्नुलाई कमेडी–भिडियोका रूपमा प्रस्तुत गर्दा बालबालिकाको मस्तिष्कमा के छाप पर्ला ? टिकटकमार्फत हामीले बाल दिमागमा पितृसत्तात्मक विचार भरिदिँदै छौं । महिलाहरूको वस्तुकरण गरेर त्यसलाई सामान्यीकरण गर्न हामी टिकटकमार्फत भूमिका खेलिरहेका छौं । यसले वर्षौंदेखिको समानताको आन्दोलन र कार्यक्रमलाई अन्ततः अर्थहीन बनाउँदै लगेको भान हुन्छ ।
मैले टिकटकमा भएका सारा भिडियो नकारात्मक सन्देश दिने खालका वा ती झुर हुन्छन् भन्ने खोजेकी होइन । न त यसको प्रयोग गर्नुहुन्न भन्ने मेरो मनशाय हो । भारत र अमेरिकामा टिकटकमाथिको प्रतिबन्धलाई मैले सोह्रै आना सही मानेकी छैन । टिकटकमा गुणस्तरीय कन्टेन्टहरू पनि छन् । यसले मनोरञ्जन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहनेलाई अवसरसमेत दिइरहेको छ । मेरो भनाइ यति मात्र हो, मनोरञ्जनका नाममा महिलाको अपमान हुने भिडियो नबनाऔं । र, तिनमा बालबालिकालाई त पटक्कै प्रयोग नगरौं । र, टिकटकमार्फत पितृसत्ताको मतियार हुन छोडौं ।